Cortexolone 17α-propionate အမှုန့် (19608-29-8) hplc≥98% | AASraw
Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်
rating: SKU: 19608-29-8. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Cortexolone 17α-propionate အမှုန့် (19608-29-8) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Cortexolone 17α-propionate အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်
Cortexolone 17α-propionate သံသရာ
အခြားအမည်များ: CB-03-01, Winlevi အမှုန့်, Breezula အမှုန့်, 11-deoxycortisol 17α-propionate, Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်
Cortexolone 17α-propionate အသုံးပြုမှု
အထူးသတစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် receptor ရန် - - Cortexolone 17α-propionate တစ်ဒြပ်တီးရွိုက် antiandrogen ကြောင်းဝက်ခြံ vulgaris နှင့်အန်ဒရိုဂျင် Alopecia (အထီး-ပုံစံအပါအဝင်အန်ဒရိုဂျင်-မှီခိုအခြေအနေများ၏ကုသမှုအတွက်လိမ်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန် Cassiopea နှင့်သတ္တိကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းများကဖှံ့ဖွိုးတိုးအောက် ဆံပင်ကျွတ်) ။
Cortexolone 17α-propionate ၏သောက်သုံးသောကဘာလဲ
Cortexolone 17α-propionate 1% cream ကို, ဝက်ခြံ vulgaris ၏လိမ်းဆေးအသစ်တခုအစွမ်းထက် antiandrogen ။ တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူး, ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် tretinoin0vs. ကို double-မျက်စိကန်းနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု· 05% cream ကို randomized ။
ဝက်ခြံ vulgaris သည့်အန်ဒရိုဂျင်က၎င်း၏စတင်ခြင်းနှင့်ဇွဲအထောက်အကူပြုသည့်အတွက် pilosebaceous ယူနစ်တစ်ခုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ antiandrogens များအသုံးပြုမှုထို့ကြောင့်အလားအလာထိရောက်သောဖြစ်၏ သို့သော်လိမ်းအသုံးပြုရန် antiandrogens စျေးကွက်အပေါ်ကိုမရရှိနိုင်ကြသည်။ Cortexolone 17α-propionate ဝက်ခြံ vulgaris အတွက်အလားအလာအသုံးဝင်သောသစ်တစ်ခုအစွမ်းထက်လိမ်း antiandrogen ဖြစ်ပါတယ်။
·ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် tretinoin 17 နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက 1% cream ကိုလုံခြုံမှုနှင့်ဝက်ခြံ vulgaris အတွက် Cortexolone 0α-propionate 05% cream ကို၏လိမ်းထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်။
မျက်နှာဝက်ခြံနှင့်အတူခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ယောက်တို့ကိုသုတေသန၏ Global အကဲဖြတ် (IGA) အရ 2-3 သွင်းယူ 15 ·ရလဒ်များအရအိပ်ယာမုန့် (ဎ = 17) ကိုလက်ခံရရှိရန် randomized, ဒါမှမဟုတ် Cortexolone 1α-propionate 30% cream ကို (ဎ = 0), သို့မဟုတ် tretinoin 05 ခဲ့ကြသည် 32 ပတ်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ% cream ကို (ဎ = 8) ။ လက်တွေ့ထိရောက်မှုစုစုပေါင်းတွေ့ရှိရပါသည် count က (TLC), ရောင်ရမ်းကိုတွေ့ရှိရပါသည် count က (ILC), ဝက်ခြံပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း (asi) နှင့် IGA အပါအဝင်တိုင်း2ရက်သတ္တပတ်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအကဲဖြတ်ဒေသခံ Irritable ရမှတ်, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ, အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာနှင့်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏အသံဖမ်းပါဝင်သည်။
သမဝါယမ-03-01 မုန့်အလွန်ကောင်းစွာသည်းခံခဲ့ခြင်း, TLC (P =0· 0017) နှင့်စပ်လျဉ်းရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သိသိသာသာပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်, ILC (P =0· 0134) နှင့် asi (P =0· 0090), နှင့်လည်းဆေးခန်းကပိုထိရောက် နှိုင်းယှဉ်ထက်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုလည်းအားလုံးအထက်ပါသတ်မှတ်ချက်ဘောင်အတွင်း 50% တိုးတက်မှုတစ်ခုပိုမြန်ဆည်းသွေးဆောင်။ သမဝါယမ-03-01
ဤသည်လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှုဝက်ခြံ vulgaris ၏ကုသမှုအတွက်လိမ်း antiandrogens ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ခံပါတယ်။ Cortexolone 17α-propionate 1% cream ကိုလိမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်စံပြ antiandrogen များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုအတူ fit မှပုံရသည်။
ဘယ်လို Cortexolone 17α-propionate အကျင့်ကိုကျင့်
အထူးသတစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် receptor ရန် - - Cortexolone 17α-propionate (CAS 19608-29-8), သို့မဟုတ် 11-deoxycortisol 17α-propionate တစ်ဒြပ်တီးရွိုက် antiandrogen ကြောင်းအတွက်လိမ်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန် Cassiopea နှင့်သတ္တိကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းများကဖှံ့ဖွိုးတိုးအောက် ဝက်ခြံ vulgaris နှင့်အန်ဒရိုဂျင် Alopecia (အထီး-ပုံစံဆံပင်ကျွတ်) အပါအဝင်အန်ဒရိုဂျင်-မှီခိုအခြေအနေများ၏ကုသမှု။ ဒါဟာ 17-deoxycortisol (cortexolone) ၏C11α propionate Ester ဖြစ်၏ 17-deoxycortisol ၏C11α Ester မမျှော်လင့်ဘဲ antiandrogen လှုပ်ရှားမှုအပိုင်တွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့် cortexolone 17α-propionate က၎င်း၏အကောင်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အခြေပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသေးသည်။
ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးအရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါခိုင်ခံ့ဒေသခံ antiandrogen လှုပ်ရှားမှု, ဒါပေမယ့်မှုမရှိခြင်းကိုစနစ်တကျ antiandrogen လှုပ်ရှားမှုအပိုင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, cortexolone 17α-propionate က Peripheral ရွေးချယ်ကြောင်းအကြံပြု, progonadotropic မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦး bioassay မှာမူးယစ်ဆေးများလိမ်းအာနိသင်ချို့ယွင်းသော flutamide နှင့် finasteride ၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြီးနှင့် cyproterone acetate ၏ညီမျှခဲ့သည်။
ဝက်ခြံများအတွက်လိမ်း cortexolone 2011α-propionate 17% cream ကိုနဲ့ကုသယောက်ျား၏ 1 အတွက်တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမူးယစ်ဆေးအလွန်ကောင်းစွာ-သည်းခံခဲ့သိသိသာသာဝက်ခြံလက္ခဏာတွေလျှော့ချကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုတက်ကြွစွာနှိုင်းယှဉ်, tretinoin 0.05% cream ကိုထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2017 ၏အဖြစ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအဆင့်ဝက်ခြံ vulgaris နှင့်အန်ဒရိုဂျင် Alopecia များအတွက်အဆင့် II ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အ III ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
Cortexolone 17α-proprionate ၎င်း၏ polymorphic ပုံစံများအတွက် Breezula အမှုန့်: ပထမဦးဆုံးမူပိုင်မိသားစု, ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာအတွက် 2022 / 23 နှင့် 2022 အတွက် United States မှာကုန်ဆုံးမည့်, ဝက်ခြံ၏ကုသမှုများအတွက်ဝင်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်း, Alopecia နှင့် အခြားရောဂါများ; ဒုတိယမူပိုင်ခွင့်မိသားစုအပေါငျးတို့သ API ကို၏လူသိများပုံဆောင်ခဲပုံစံများ, တူညီတဲ့ API ကိုင်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆေးဘက်ဝက်ခြံကုသအသုံးပြုမှု, aga နှင့်အခြားရောဂါများကိုဖုံး: ဤမူပိုင်မိသားစုပြီးသားအမေရိကန်, ဥရောပ, ကနေဒါ, ဂျပန်နှင့်များတွင်ထုတ်ပေးနေသည် အခြားနိုင်ငံများက, world.Breezula အမှုန့်၏ကျန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် 2030 အတွက် 2028 အတွက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်
Cortexolone 17α-propionate ကုန်ကြမ်း Powder
Cortexolone 17α-propionate ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
သင့်ရဲ့ reference.Winlevi အမှုန့်သည်, အသေးစိတျအဘို့အစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် Representitive (CSR)
Cortexolone 17α-propionate စျေးကွက်
Cortexolone 17α-propionate မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
Cortexolone 17α-propionate ဝက်ခြံ vulgaris ၏ကုသမှုများအတွက်သီးခြားစွာလျော်ပုံပျော့ antiinflammatory လှုပ်ရှားမှု, နှင့်ပြည့်စုံသစ်တစ်ခုတီးရွိုက်-Ester, Peripheral ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင်-ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သမဝါယမ-03-01 အရေပြားအတွက်5α-reductase ဟန့်တားခြင်းမရှိဘဲလူ့အန်ဒရိုဂျင်-receptor အဆင့်မှာဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးအလွယ်တကူလူ့အသားအရေစိမ့်ဝင်သွားတယ်နှင့်လျင်မြန်စွာစနစ်တကျသက်ရောက်မှုကငျးမဲ့သောအရာအခမဲ့မိဘ cortexolone မှ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ အရေးကြီးတာက, ယနေ့အထိမဆိုဒေသခံသို့မဟုတ်စနစ်တကျ Steroid တစ်မျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသရုပ်ပြခြင်းမရှိသေးပေ။
AASraw ထံမှ Cortexolone 17α-propionate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Monomethyl auristatin အီး (MMAE) အမှုန့်
LCZ696 အမှုန့် (936623-90-4)